रवि लामिछानेको राजनीतिक लाइनः गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा उभिने – नेपाली जनता :: Nepali Janta:
रवि लामिछानेको राजनीतिक लाइनः गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा उभिने
काठमाडाैं । सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले नयाँ पार्टीको घोषणा गरेपश्चात उनीमाथि लागेको एउटा आरोप हो- आफ्नो राजनीतिक लाइन नखुलाएको । पार्टी घोषणासभामा रविले देशका मुख्य राजनीतिक विषयवस्तुमा मौनता साँधेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दक्षिणपन्थी हो वा वामपन्थी ? गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे उसको अडान के हो ? २०७२ मा जारी संविधानप्रति यो पार्टीको दृष्टिकोण के छ ? यस्ता जिज्ञासाहरु जनमानसमा छन् ।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ ले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीमाथि उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिनुको साथै राजनीतिक एन्जेडाबारे पनि रविले प्रष्टाउने छन् ।
पार्टी गठनको घोषणा गर्नुपूर्व रविले विभिन्न पार्टीहरुसँग नेगोसिएसन गरेका थिए । उनको सबैभन्दा सघन संवाद राप्रपासँग भएको थियो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नै रविसँग पटक-पटक कुराकानी गरेका थिए । राप्रपा राजतन्त्र, हिन्दूराज्य र एकात्मक राज्य प्रणालीको वकालत गरिरहेको पार्टी हो । यो पार्टीसँग नेगोसिएसन गर्नुको मतलब रविको राजनीतिक लाइन पनि यही नै हो कि भन्ने प्रश्न उब्जेको थियो ।
निकट स्रोतका अनुसार रवि राजतन्त्रप्रति सदासय राख्छन् । तर, राजावादी भनेर चिनिन चाहँदैनन् । संघीयताका आलोचक भए पनि संघीयताको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउने मुडमा छैनन् । यस्तै धर्मनिरपेक्षतामा पनि प्रश्न उठाउने उनको सोच छैन ।
रविनिकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान संविधानको एउटा व्यवस्थामा मात्रै परिवर्तन चाहेको छ । त्यो हो प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन पद्धति । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने वकालत रविले घोषणासभामा नै गरेका थिए । योबाहेक संविधानका सबै विषयवस्तु पार्टीले स्वीकार्ने स्रोतले बतायो ।
‘उहाँले राजावादी होइन, गणतन्त्रवादीकै रुपमा राजनीति गर्नुहुनेछ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पनि उहाँले कुनै असहमति राख्नुहुने छैन’, स्रोतले भन्यो ।
घोषणासभामा रविले आफ्नो पार्टी व्यवस्था परिवर्तन गर्न नभई अवस्था परिवर्तन गर्न गठन भएको बताएका थिए । मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने उनको भनाइबाट संघीयताको स्वीकार्ने अर्थ लाग्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस नेकपाको सचिवालय बैठक एउटा विषयका लागि बसेको भएपनि अर्कै विषयमा केन्द्रित भएर सकियो
‘यदि असल नियतका साथ इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने यही संविधानमा टेकेर पनि देश बदल्न सकिन्छ’, रविले भन्दै आएका छन् ।
रविले घोषणासभामा पार्टीका ७ विशेषताहरु सुनाएका थिए । ती विशेषतामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्नेबाहेक अरु राजनीतिक एजेन्डा थिएनन् ।
नाम र चुनावचिन्हको अन्योल
रवि लामिछानेको पार्टीको नामलाई लिएर अहिले तीव्र विवाद उत्पन्न भइरहेको छ । विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले यो नाममा आपत्ति जनाएर आयोगमा निवेदन दिएका छन् । आयोगले नै यसको छिनोफानो गरोस् भन्ने रवि चाहन्छन् ।
यता आयोगले भने तत्काल यो छिनोफानो नहुने संकेत गरेको छ । दल दर्ताको निवेदन र यसमाथि परेका उजुरीहरु एउटै फाइलमा पेस गरेर कानूनी टिमले अध्ययन गरेपश्चात निर्णय लिइने आयोग स्रोतले बतायो ।
‘दल दर्ताको प्रक्रिया पुरा हुन कम्तिमा पनि २०-२५ दिन लाग्न सक्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘नाम र चुनाव चिन्हको एकैसाथ टुंगो लाग्छ ।’
राष्ट्रिय स्वन्तन्त्र पार्टीले घन्टी चुनाव चिन्ह मागेको छ । अहिले सक्रिय कुनै पनि दलहरुसँग यो चुनाव चिन्ह छैन । तर, एक वर्षयता खारेजीमा परेको कुनै दलले यो चिन्ह लिएको पाइएमा रविले पाउँदैनन् । त्यसपछि आयोगले उनलाई तीनवटा बैकल्पिक चिन्ह प्रस्ताव गर्नेछ ।
१०,असार.२०७९,शुक्रबार ११:५३ मा प्रकाशित